Galmudug oo Madaxweyne la’aan ah | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo Madaxweyne la’aan ah
Dowlad goboleedka Galmudug caawa malaha kusime Madaxweyne, iyadoo ay ka maqan yihiin xaruntii maamulka Madaxweynihii, Madaxweyne ku xigeenka, Guddoomiyihii baarlamanka iyo labadiisi ku xigeen.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa caawa markii ugu horreysay jabisay Dastuurka, iyadoo qodob kamida qodobada dastuuriga ah ee ku qoran Dastuurka Dowlad Goboleedka Galmudug uu leeyahay “Galmudug waxaa ku sime madaxweyne ka ah Madaxweyne ku xigeenka, haddii uu maqan yahay Guddoomiyaha Baarlamanka, haddii uu maqan yahay ku xigeenka 1-aad, haddii uu maqan yahay ku xigeenka 2-aad. Mas’uuliyiintaas oo dhana kama wada maqnaan karaan Deegaanada Galmudug!”
Dhammaan mas’uuliyiintaas ku qoran dastuurka DG ayaa caawa ku sugan gudaha magaalada Muqdisho oo ay ka socoto Olole doorasho, taasoo ay u muuqato in ay qeyb ka yihiin mas’uuliyiinta ugu sarreysa Galmudug, waxaana loo wada xusul duubayaa xulista xildhibaanada labada gole Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare BJFS.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa ugu dambeeyay, galabtay ayuu soo gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo la filaayo inuu qeyb ka noqon doono heshiis qarsoodi ah kaasoo lagu saxiixayo Xirmooyin kamida Shidaalka Soomaaliya oo qeyb ahaan xirmooyinkaasi ay Galmudug wax ku leedahay.
Ma jirto mar lagu fakaray in la dhowro dastuurka qoran ee la doonayo in lagu dhaqo bulshada, caawa ayeyna markii ugu horreysay jabiyeen qodob kamida qodobada dastuuriga ah ee u qoran Dowlad Goboleedka Galmudug.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Ciid ayaa yimid Muqdisho 01/January/2021 isagoo qeyb ka ah dadka u ololeenaya soo laabashada mar kale Farmaajo iyo xafiiska Villa Somalia.
Guddoomiyaha Baarlamanka Dowlad Goboleedka Galmudug Dr.Maxamed Nuur Gacal iyo labadiisa ku xigeen Mudane Cabdulaahi Maxamed iyo Marwo Faadumo Cabdi Faandhe ayaa muqdisho ku sugan tan iyo November 2020 xilligaas oo ay muqdisho uga qeyb galeen Seminar loo furay xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug kaasoo ay uqabaneysay Hay’adda UNDP.